Ihe dị ka Mmadu 300 anwụgo na Agatu - NDỊ IGBO KWENU
Home / Ụwa / Afrika / Ihe dị ka Mmadu 300 anwụgo na Agatu
Ihe dị ka Mmadu 300 anwụgo na Agatu
ndiigbokwenu1 April 5, 2016	Afrika Leave a comment 557 Views
Ihe dị ka Mmadu 300 anwụgo na Agatu L.G.A n’ime Benue Steeti. Ihe a mere oge ndị ha n’eche na ha bụ ndị Fulani n’azụ ehi bidoro ọgụ na ngalaba dị iche-iche ebeahu. Okokolo, Akwu, Ocholonya, Adagbo, Ugboku, na Aila so na Obodo ebe ndị nsogbu a gburu mmadụ ma gbaa ụlọ ndị mmadụ ọkụ
“Ndị mmadụ agbafugo n’ọtụtụ obodo ọkachasi Obagaji, ebe ndị mmadụ n’agavu ezo n’oge gara-aga’’
Otu onye si Akwu gwara ndị Journalist na Benue na “ndị mmadụ si Ugbokpo agbaga Apa council. Agha a dị ka ihe e tukwuru ala hazie iji megbuo ndị Agatu. Ugbua m n’agwa unu okwu, ezigbote ọgụ ka ha n’alụ ebeahu. Otụtụ ndị mmadụ efugo, anyị nwere ọtụtụ ndị mmadụ n’enweghi ebe ha ga anọ”
Otu onye na anọchitere ndị Agatu n’ụlọ nzukọ omeiwu, Sule Audu, gwara ndị THISDAY na ekwenti n’ụbọchị Wednesday na ọtụtụ ndị mmadụ anwụgo. Otu onye ozi ya na Nasarawa Steeti agwago ya na ọtụtụ ndị na emenye ha ụjọ ji ụgbọ-ala aga Loco ebe ha ga esi banye Agatu ga lụọ ọgụ”
Ugbua, Opiatoha K’idoma, otu nzukọ ndị Idoma n’akpọ ndị ọchịchị Naijiria ka ha bia nyere ha aka kwusi agha ndi Fulani n’alụsa ha n’obodo ha. Ha kwuru sị “Ihe anyị na hụ na Agatu taa dị ka ihe n’eme na North East ya mere anyị ji sị ka Federal Government lebanye ya anya ngwa ngwa”
“Ndị idoma enweghi enyemaka. Ndị Agatu kariri 300 na ndi ọzọ ka e gbugoro kemgbe agha a bidoro n’izu ụka gara aga. Onweghi ihe State Government mere iji kwusi ndị a n’eyi ọha egwu
Kita, onweghi ebe atumatu mmadu nwere ike ịsị na ọ bụ ebe ndị agha metutara nwere ike inọ. Ndị kacha ata ahụhụ bụ ụmụazi na ụmụnwanyi. Ha n’arịọ Federal Government ka ha bia ruọ ụlọ ndị ami na Agatu, ma ọbụrụ na emeghi ya n’oge n’adịghị anya Agatu ga abụrụ ihe gara-aga”.
Previous Mazi Ego OTM
Next Ihe onyonyo Onye Ije ‘The Traveller ‘